M na-ele ọtụtụ ndị enyi m na ụlọ ọrụ na-egwu ngwa ngwa na omume rụrụ arụ, m na-atụ egwu na ha ga-enwe nsogbu n'otu ụbọchị. Amaghị ama abụghị ihe ngọpụ ma ebe ọ bụ na ndị a bụ usoro nchịkwa, ọ dị mma na mgbe ụfọdụ ọ dị oke ọnụ karịa ịkwado ya na iwu. Abụọ n'ime mmebi iwu m hụrụ bụ:
Gaghị ama na ị nwere mmekọrịta ego na ụlọ ọrụ - ma ị bụ onye nwe ya, ọorụ ya, ma ọ bụ onye na-emetụta ihe akwụ ụgwọ iji kwalite ụlọ ọrụ ahụ bụ mmebi iwu ọ bụla Ntuziaka gbasara ojiji nke Endorsements ma ọ bụ Akaebe na Mgbasa Ozi.
Ọbụna ma ọ bụrụ na onye na-ezipụ kwekọrọ na CAN-SPAM, ha ka na-egosiputa mmekọrịta ego na onye nnabata. Ọ bụrụ na ịmara onye na-emebi iwu ọ bụla, zigara ha njikọ gaa na edemede a ma dọọ ha aka ntị ka ha kwụsị.